सिद्धार्थ बैंकको आजदेखि हकप्रद खुल्यो, फारम भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सिद्धार्थ बैंकको आजदेखि हकप्रद खुल्यो, फारम भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - सिद्धार्थ बैंकको ३०% हकप्रद सेयर बिहीबार देखि बिक्री खुला भएको छ । बैंकले १०ः३ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको १ करोड ५७ लाख ५२ हजार ५७८.१३ कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । यो हकप्रद असार २८ गतेसम्म भर्न पाइनेछ ।
यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले गरेको हो । आवेदकले सिद्धार्थ बैंकको हात्तिसार, काठमाडौंलगायत यसका अधिकांस शाखा कार्यालयबाट हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, लक्ष्मी क्यापिट मार्केटबाट पनि हकप्रदका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।